Ndị na-elekọta | Radị Rave
Ndị edemede Freelance
Nwere okike ejiji na ahụmịhe odide ndụ? Chọrọ iso anyị rụ ọrụ dịka onye edemede n’efu? Ọ bụrụ otu a, inwere ike inyefee malitegharịa / CV na akwụkwọ edemede ederede abụọ (2) jobs@stylerave.com.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ka ahụmịhe ụlọ ọrụ mgbasa ozi ụwa n'ezie, Style Rave na-enye ọtụtụ ọzụkọ ọrụ ụwa nke ị ga - esi nweta ihe omuma bara uru nke ga - enyere aka na ọrụ ọrụ n'ọdịnihu.
Banyere Mmemme Anyị
Ebumnuche Style Rave bụ iwetara ndị na - agụ akwụkwọ ihe kachasị mma na ụdị ejiji nke ndị Naijiria, ejiji, ụdị ndụ, ọdịnala, ụdị ndị ọzọ. Anyi na agba mbo ime ka anyi mara ihe, mee ka anyi mata ndi n’enwe ihe ngosi site na otutu uzo di iche iche.
Ndị ruru eru ruru eru na-achọ isonyere ndị otu anyị ga-enwerịrị ezigbo mmadụ ma nwee ike ịrụ ọrụ n'okpuru nrụgide nke oge na-aga ma mezuo ihe ndị chọrọ maka mpaghara. Ndi umu akwukwo agha aghaghi imezu oge zuru ezu (onwa ato) ma n ’opekata mpe elekere iri (iri) n’ime izu. A naghị akwụ ụgwọ ụlọ akwụkwọ ọzụzụ niile. A ga-enye leta nke nkwenye mgbe emechara mmemme a. * Ọnọdụ niile dịpụrụ adịpụ n'oge a.
Mpaghara Ndị Nwere Mmasị
nkwado/Editorial: Ndị editọ akwụkwọ akụkọ ga-enwe ohere maka ibipụta akụkọ ha, nke ga-ewulite Pọtụfoliyo ederede ha mkpa maka ohere ọrụ ha na-eme n'ọdịnihu na mgbasa ozi, ma mee njikọta nke ga - enyere aka na mbọ ọhụụ.
Nyochaa akwụkwọ akụkọ
Eziokwu nlele nchịkọta akụkọ
Melite / mepụta ndepụta na pịkọta
Ajụjụ banyere akụkọ gbasara ajụjụ ọnụ
Soro na-eme ma na-enye aka na nzukọ ndị ọrụ oge niile
Nyere aka na ihe omume nke ọ bụla nke blogazine na-akwado
Nyefee echiche akụkọ na njiri ede ede
Nye onyinye na mgbasa ozi mmekọrịta
Kpọọ ndị na-akpọsa ngwa ahịa
Ahịa / Mgbasa Ozi / Ahịa
Mepụta ma na -eme mkpọsa ahịa
Na-eduzi nyocha nke ndị mgbasa ozi nwere ike ịdị
Nye aka na echiche ndị na-akpata ego
Mee oru ahia ozo dika enyere gi
Mepụta na / ma ọ bụ chikọta ihe maka nzukọ ndị ahịa na ihe ngosi
Social Media / Weebụ: Ike iji sọftụ dijitalụ dịka sistemụ nchịkwa ọdịnaya anyị, Facebook, Twitter, na Instagram bụ ihe dị mkpa maka ọnọdụ a. Ihe ndi ozo choro nwere ikike iru oru na komputa na Microsoft nke kachasi.
Camepụta kalenda mgbasa ozi ọhaneze kwa ọnwa
Eramepụta & na-eme ihe ntụrụndụ mbụ
Ntinye ọdịnaya maka nkwalite ọdịnaya na ihe omume site na ntanetị mgbasa ozi na-elekọta mmadụ
Inye aka na akwukwo ozi ahia banyere e-mail
Inye aka na nhicha data nke ozi-e na ndepụta ndekọ web
Inye aka na oru nyocha weebụ
Photography: Anyị na-achọ ndị na-ese foto Lagos ma ọ bụ Abuja iji kpuchie ihe omume ụlọ ọrụ na ọrụ enyere. Ndi ezigbo ndoro-ndoro maka onodu a gha agbanwe, ahazi, nzaghachi.
Na-agbapụ foto nke ihe omume na ọrụ onye ahịa
Inye aka na mmeputa tupu emeputa ihe na imeputa ihe ndi ozo gbasara ihe nlere nke foto
Mmejuputa atumatu foto na web
Rụzu ọrụ metụtara usoro dijitalụ dị iche iche
Ndị nwere mmasị ịga akwụkwọ ntanetị ga-akpaghasị email ịmalite / CV, akwụkwọ ozi mkpuchi na ọrụ nlele ha interns@stylerave.com na-egosi mpaghara ha nwere mmasị maka nyocha na ntụle.